Dhagaxa Dhaqanka, Dhagaxda Dabiiciga ah, Dhagaxa Gidaarka - LONGSHAN
1. Way fududahay in la rakibo, iyo qiime jaban. Midabkan madow ee dhalaalaya ee dhagaxa dhaqanku aad ayuu u fudud yahay midab kale. Samee naqshadeyntaada dhagaxan dabiiciga ah ee cajiibka ah. 2. ...
Alaabtaan waxaan sidoo kale ugu yeernaa guddi cad oo baraf leh, dusha sare wuxuu u eg yahay baraf, marka guddiga ka hooseeya qorraxda, waxaa ku yaal meel dhalaalaysa dusha sare, waxay umuuqataa mid aad u qurux badan. Wejigan kala jaban fi ...
Waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu caansan suuqa dhagaxa, waxaan u dhoofineynaa badeecadan adduunka oo dhan sanado badan. Midabada jilicsan ee jilicsan waxaa lagu kabayaa kala duwanaanta dabiiciga ah iyo dahaadhka dhagaxa. U ...
Waxaan u fidineynaa midabyo kala duwan, dhammeystiran, qaabab, iyo qaabab iyo waliba isku xirka qaybaha geeska si aad u awoodo ...
Badeecadani waa midabbo badan, waxay umuuqataa mid aad u qurux badan oo dusha sare wali waxay haysaa dhagaxa dabiiciga ah ee u gaarka ah iyo midabka ka dib soo saarista, goynta iyo isku xidhka isku xidhka. Waa xulasho aad u d ...
Waa badeecada ugu caansan suuqa dhagaxa, Dusha sare wali wuxuu hayaa maqaarka dabiiciga dabiiciga ah iyo midabka ka dib soo saarista, goynta iyo isku dhafka isku dhafka. Dhamaan guddiga waxaa sameeyay t ...
1.Waa 4 xarigood, wadarta dhererkeedu waa 40cm.interlock 5cm .Qaabka caadiga ah waa Z iyo S .Beesha dhumucdiisuna waa 8-15MM, culeyska waa mid aad u fudud, marka waa sahlan tahay in la qaado oo la dhiso. 2. Murayaad dhan ...
1. Dhagxaanta Wareegsan ee Dhagxaanta Dhagxaanta waa xayndaabyo dhaadheer oo dhagaxyo ah oo qaab ahaan loo qaabeeyey. Waxay isku dhagan yihiin doorbid ahaan in loo isticmaalo duubista bannaanka iyo daboolka aagga dabka. Qayb kasta oo leben ah ayaa ka kooban iskudhaf ...
Dhagaxa Longshan waxaa la aasaasay sanadkii 1988, iyadoo la diiwaan galiyay caasimada 10millon yuan.Waxay ku taalaa Yixian, Baoding City, Hebei ee dalka Shiinaha.